Isahluko 1 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ingabe labo abafakaza ngamazwi Ami bawamukela ngempela? Ingabe ningazi ngempela? Ingabe niye nafunda impela ukulalela? Ingabe nizikhandla ngobuqotho Ngami? Ingabe niye naqina, nangahoxi ekufakazeni Ngami ebusweni bukadrago omkhulu obomvu? Ingabe ukuzinikela kwenu kumlulaza ngempela udrago omkhulu obomvu? Kungokwenza amazwi Ami kuphela lapho ngingakwazi khona ukufinyelela umgomo Wami wokucwenga ibandla kanye nokukhetha labo abangithanda ngeqiniso. Ngoba kungayiphi enye indlela umuntu angangiqonda ngayo? Ubani ongaqonda ubukhosi BaMmi, ulaka Lwami, nokuhlakanipha Kwami emazwini Ami? Ngizoqeda lokho engikuqalile, kodwa kuseyimi olinganisa izinhliziyo zabantu. Eqinisweni, akakho umuntu ongiqonda ngokugcwele, ngakho ngibaqondisa ngamazwi, futhi ngibaholele enkathini entsha ngale ndlela. Ekugcineni ngizoqeda wonke umsebenzi Wami ngokusebenzisa amazwi Ami, futhi ngilethe labo abangithanda ngeqiniso embusweni Wami, ukuze baphile ngaphambi kwesihlalo Sami. Isimo asisafani naleso esake saba yiso, futhi umsebenzi Wami usungene esigabeni esisha. Ngenxa yalokho, kuzoba nendlela entsha: Labo abafunda izwi Lami futhi balemukele njengokuphila kwabo bangabantu bombuso wami. Njengoba basembusweni Wami, bangabantu Bami embusweni. Ngoba baqondiswa ngamazwi Ami, nakuba kubhekiselwa kubo ngokuthi abantu Bami, lesi sikhundla asisincane neze kunokubizwa “ngamadodana” Ami. Njengabantu BaMmi, bonke kufanele bathembeke embusweni Wami futhi bafeze imisebenzi yabo, futhi labo abaphikisana nemiyalo Yami yokuphatha kufanele bathole isijeziso Sami. Lesi yisixwayiso sami kubo bonke.
Njengoba manje kusetshenziswa indlela entsha, konke lokho okwedlule akudingeki ukuthi kuphinde kushiwo. Nokho, ngisho lawa mazwi: Lokho engikushilo kufanele kwenzeke, lokho okwenzekile kufanele kuqedwe, futhi lokhu akunakushintshwa yinoma ubani; lokhu kuyiqiniso ngokuphelele. Kungakhathaliseki ukuthi yilokho engikusho esikhathini esedlule noma yilokho engikusho esikhathini esizayo, konke kuzokwenzeka, futhi sonke isintu sizokubona. Lesi yisimiso okusekelwe kuso umsebenzi wamazwi Ami. Njengoba ukwakhiwa kwebandla sekwenziwe, manje akuseyona inkathi yokwakhiwa kwebandla, kodwa kunalokho yinkathi yokwakhiwa ngempumelelo kombuso. Nokho, njengoba nisesemhlabeni, imibuthano yenu izoqhubeka nokwaziwa ngokuthi “yibandla.” Nakuba kunjalo, umongo webandla awusafani nendlela owawungiyo, futhi uye waba impumelelo ngempela. Ngakho, ngithi umbuso Wami sewehlele emhlabeni. Akakho ongaqonda ingqikithi yamazwi aMi, akakho ongaqonda injongo yawo. Njengoba ngikhuluma namuhla, kungenzeka nibone ukuzibonakalisa. Mhlawumbe abanye bazoqhuma ngokukhala; abanye kungenzeka bazizwe besaba ukuthi lena yindlela engikhuluma ngayo. Abanye kungenzeka babe nombono omdala wazo zonke izenzo Zami; abanye bangazisola ngokukhononda kwabo noma ngokumelana Nami; abanye bangase bajabule ngaphakathi, ngoba abazange baphambuke egameni Lami, futhi osukwini lwanamuhla bayavuselelwa; mhlawumbe abanye abantu baphazanyiswa amazwi Ami kudala, futhi bangazi ukuthi kufanele benzeni, badangala futhi bacindezeleka, futhi abasenasithakazelo sokulalela amazwi engiwakhulumayo ngisho noma sengikhetha indlela ehlukile yokukhuluma. Kungenzeka ukuthi kunabathile abazinikele kakhulu Kimi abangakaze bakhononde, abangakaze bangabaze, futhi namuhla banenhlanhla yokuthola ukukhululwa futhi bazizwa bengenawo amazwi okungibonga ezinhliziyweni zabo. Wonke umuntu uwela ngaphansi kwalezi zigaba kumazinga ahlukahlukene. Kodwa njengoba okungemuva sekwedlule, futhi okukhona yilokhu okwenzeka manje, akunasizathu sokulangazelela osekwedlule, noma ukukhathazela ngokuzayo. Kubantu, labo abaphambana nenkathi yamanje futhi bangenzi izinto ngokuvumelana nesiqondiso Sami ngeke babe nesiphetho esihle, futhi bayozilethela kuphela izinkinga. Kuyo yonke into eyenzeka emkhathini, akukho eningenalo izwi lokugcina kuyo. Yini ekhona engekho ezandleni Zami? Konke engikushoyo kwenzeka njengoba, futhi kubantu, ubani okhona ongashintsha umqondo Wami? Kungenzeka yini kube yisivumelwano engisenze emhlabeni? Akukho okungavimba uhlelo Lwami; Ngihlala njalo ngikhona emsebenzini Wami kanye nasohlelweni Lwami lokuphatha. Yini umuntu angayiphazamisa? Ingabe akumina yini owenze lawa malungiselelo? Ukungena kulesi simo namuhla, selokhu akuchezukile ohlelweni Lwami noma kulokho engikubone kusengaphambili; konke kwanqunywa Yimi kudala. Ubani phakathi kwenu ongaqonda uhlelo Lwami lwalesi sinyathelo? Abantu Bami bazolalela izwi Lami, futhi umuntu ngamunye kulabo abangithanda ngeqiniso uzobuya phambi kwesihlalo Sami.
uFebhuwari 20, 1992